Xidiga Jadon Sancho oo ku biiri kara Kooxda Manchester United – Xidigaha
Jadon Sancho ayaa ku dhow inuu u dhaqaaqo Manchester United xagaagan marka la eego mushaharka xidigan.
Red Devils ayaa weli lala xiriirinayaa 20 jirka, laakiin BVB ayaa ku adkeystay dhowr jeer tan iyo markii uu ku soo laabtay tababarka xilli ciyaareedkii hore in ciyaaryahanka reer England uusan ka tagi doonin kooxda.
Sida laga soo xigtay Manchester Evening News , kooxda heysata 20ka jeer horyaalka Ingariiska ayaan weli wax guul ah ka gaarin wadahadalada ku aadan mushaharka uu soo bandhigay iyo khidmadda wakiilkiisa.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay ka go’an tahay inaysan ka badinin midkood Sancho ama wakiilka, iyagoo horay ugu sameeyay heshiisyo ay ku lug lahaayeen Paul Pogba iyo Alexis Sanchez .
United ayaa lagu soo waramayaa inay diidan tahay inay ka tanaasusho heshiiska xiddigii hore ee Manchester City, laakiin waxaa weli loo arkaa inay heshiis shaqsi ah la gaari karaan ciyaaryahanka iyo inay u wareegaan Dortmund.
Sancho wuxuu ku riyaaqay xilli ciyaareed wanaagsan 2019-20 kooxda Lucien Favre , isagoo dhaliyay 20 jeer isla markaana diiwaangeliyay 20 ka caawiyay 44 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Liverpool ayaa sidoo kale la sheegay inay il gaar ah isha ku heyso horumarka.
Be the first to comment on "Xidiga Jadon Sancho oo ku biiri kara Kooxda Manchester United"